Ukukhetha umboneleli ngeposi enkulu - amava e-Personal - Geofumed
NgoSeptemba, 2017 Internet kunye neBlogs
Injongo yiphina inxaxheba yoshishino eyenza ubukho bayo kwi-intanethi, ihlala ihlala kwaye iya kuba yenze ixabiso. Oku kusetyenziswa kokubili kwinkampani enkulu ene-website, elindele ukuguqulela iindwendwe ekuthengiseni, kunye nebhulogi elindele ukuba ngabafundi abatsha kwaye bahlale bethembekile kwizinto ezikhoyo. Kuzo zombini iimeko, ulawulo lwababhalisi thumela iimeyile ezikhulu Ingumngeni omkhulu, ekugqibeleni ukuba isigqibo esibi sinokuphela kwisigwebo kwinxalenye yeenjini zokukhangela de ukuvalwa kwesiza sokuphulwa komgaqo-nkqubo welizwe apho isayithi ithathwa khona.
Xa sijonga ukubaluleka kwale magazini, ndacinga kweli nqaku, ukuba umntu ebewabhalele kum kwiminyaka embalwa edlulileyo, bendiya ndizigcinile ingxaki ezandenza ukutshintsha umnikezeli ithambeka, Bayawacima isiza ngeveki aze abuyele ukufumana umfanekiso phambi kweenjini zokukhangela, ngakumbi i-Google. Nangona kukho ababoneleli ezahlukeneyo, into ethile isekelwe ukuhlalutya enokubakho Malrelay malunga MailChimp; Ndiyakuvuyela ukuba umntu uncedo.
Kukho izinto ezicacileyo kule nto, okungaphezulu kokukhankanya. Nangona kunjalo, ngokwekcubeko jikelele, uluhlu lwababhalisile aluqokelelwanga ii-imeyili ezivela apho. Kubalulekile ukuba nomphathi oqinisekisa ukuba ukubhaliselwa kukuqinisekisiwe kabini. Isilumkiso sokuqala esiza kukufumana ngokuthumela okungalunganga kwe-imeyile yesininzi, siya kuba ngumnikeli wakho wokusingatha oza kukucela ukuba uqinisekise ukuba ufumene ukubhaliswa kwamanye ama-akhawunti e-imeyile ye-15 athathwe ngokungaqhelekanga; Ukuba unokuqinisekiswa kabini, kufuneka unikeze umhla wokubhaliselwa kunye nokuqinisekiswa kabini ip, kwaye oko uya kusindisa isikhumba sakho; ukuba awunayo indlela yokunika loo nkcazelo okanye uyayifaka, umnini-mhlaba uya kuba nzima ukulwa nalowo ungaphezu kwakhe kwaye uya kukuxelela ukuba akakwazi ukukunika inkonzo eninzi; ukuba unemihla ye-7 ukwenza i-backup kwaye uqhubele kwenye indawo. Zombini i-MailChimp kunye ne-Mailrelay inikeza ukhetho lokuqinisekiswa kabini; nangona ngokukhethekileyo, ndingathanda inkonzo enamaseva ahlala eYurophu kwaye engekho eUnited States; Inkcazo ekhethekileyo, emva kwam namava adlulileyo.
Inketho yenkonzo yamahhala kwiintlu ezincinci.
IiNkonzo zeposi zamasalela zihlala zikunika inani lokuthunyelwa ngeenyanga mahhala.
Njengomzekelo, i-MailChimp ikunika ukhetho lokuthumela kwisiqingatha se-imeyili ye-7.5 yenyanga nganye ukuya kubalandeli be-2.000; oko kukuthi, 15.000 ngenyanga.
I-Mailrelay ikunika ukhetho lokuthumela kwi-imeyili ye-6.25 inani labalandeli be-12.000, ngenyanga: oko kukuthi, ukuya kwi-imeyile ye-75.000 ngenyanga, ngenkonzo yakho yamahhala.
Akungathi i-Mailrelay inikezela ngaphezu kwe-MailChimp, ekucingeni ukuba ukusuka kubalandeli abalandelayo abhalisele i-1.000 sele sele bathathwa njengenzuzo. Ubuncinane, yilokho i-gurus ithi malunga nesi sihloko.
Iinkonzo zentlawulo ezongeziweyo.
Umbuzo wokuba kutheni ukuhlawula idibene nokulawulwa kweeakhawunti ezinkulu. Ukuba nabangabhalisi abavumelekileyo be-12.000, yinto enokubakho koqoqosho okungekho mntu uya kuchitha, ngaphandle kokuba ungayihoxisi ukubaluleka kokuthengiswa kwemeyile; Kuwe kwiiGofumadas, ixabiso lomthengi ovumelekileyo lilingana needola ze-4.99; apho ababhalisile be-12.000 babe nexabiso elidlula i-dollar ye-50.000. Ngaloo nto, kunengqiqo ukuhlawula inkonzo enokusetyenziswa kakuhle, inokukwenza inxaxheba ye-intanethi inenzuzo kwaye ivuselele amathuba okuvula amathuba.
Ihlawulela ngakumbi, ukwenzela ukuba iinkonzo ezinciphisa umngcipheko wokuluhlu lwabantu abamnyama ngokuthunyelwa kwamanani. Oku kubandakanya ukuthumela yi SMTP kunye autoresponders, ngaloo ndlela ukuthumela umda ngomzuzu, kunye nokudalwa imigudu zeentengiso, iinkonzo zihlangene inshorensi ukuba ngaphaya umda ngolwandle yenyanga akugqithwa kuso. Xa sifakela ukukhetha segmenting izintlu ezisekelwe neempawu ezifana kwilizwe okanye ulwimi, sithetha ngaphaya uluhlu lokuthunyelelwa imiyalelo elula, mayilingane geomarketing elikhulu ngakumbi.
Ukuba ucinga ngeenkonzo zeseyili ezininzi, ndincoma ukuba ukhangele i-Mailrelay. Ngokukhethekileyo, ndiyakhetha kuba abahamba nge-autoresponders bakhululekile; nakuba gqitha kuba bathi Smartdelivery, ngaloo ndlela ukuthumela ama iqalwa izikhokhelo kakhulu, ukunciphisa amathuba ukweyela lweleta engafunwayo okanye amacebo intengiso njengoko wenza Gmail xa i email ithunyelwa ngobuninzi kunye Inomxholo ophantsi wokufunda.
Post edlulileyo«Edlulileyo Ngaba sixubene ngokwenene kwinkqubo "entsha" xa kuziwa kwi-3D Spatial?
Post Next Inkqubela ye-BIM - Inkcazo yeNkcazo yonyakaOkulandelayo "